Date My Pet » Zvaunofanira Zvechokwadi kuziva: Chivalry Mambo
Atova akakurudzira ne panguva netsika kuva mukadzi simba anoziva sei kuti utarisire pacharo uye anoenda pashure zvaanoda. Iye saka simba chaizvoizvo, kuti iye haasi musikana uyo anofanira kuva mikova akazarura nokuda kwake. Akanga vanoseka maruva somunhu manikidza kudanana Overture uye tora vachibhadhara kuzodya sezvo nokutuka rusununguko wake zvemari. Heunoi varume muchivande: Ungave uri achitora CEO weimwe kambani kubva musi wokutanga kana achifambidzana musikana uyo rinoseka vachizvipa dzorudo, chivalry zvechokwadi vanofanira kupinda kutamba, uye nguva dzose anoita wake vanoziya.
Regai Vachipopotedzana, Just Tora Chance
Vanhu vanogona nharo kuti zuva ano, rakazvimirira mukadzi anogona internalize tsika chivalrous sezvo paacharwisa evakadzi. mazuva aya, ehe, varume nevakadzi vane akanyatsorevesa kuenzana, asi chivalry haisi yokunyengera vaisimudzira vakadzi udzvinyiriri kana huchipfuurira. evanhu nokusaruramisira pavakadzi. chete 7 muzana yevakadzi sokuti chivalrous mabasa, akadai vakabata mikova yakazaruka, vari patronizing, maererano Daily Mail. asi, maererano mumwe musi Elite Daily, vamwe 93 muzana vakadzi havasi kukumbira zviito izvi chivalrous. Chivalrous undertones zvakawanda vakadzi chinhu vanofanira kutarisira, uye varume vanofanira nokupinza.
Saka zvichida chivalry haana akafa, zviri kunzwisiswa. Louisa Peacock The Telegraph rinoti varume vadzivise chivalry vachitya kuti chivalrous mabasa zvichabviswa kunzwisiswa kana kutumira isiri chiratidzo. Munguva iyi digitaalinen auya, kwete kuteerera meseji kana vade ane Instagram mufananidzo kunogona zvaratidza, asi kuva zvakaoma kunyatsonzwisisa sezvo hieroglyphics. Tinogona kuva kuvhiringidzika mumagariro tsika kuti pamusoro inoongorora uye wechipiri kufembera, kunyanya kana totaura nezvokudanana uye rudo. Kunyange apo rudzi rwedu kwemubvunzo mutungamiri munhukadzi wokutanga, kunyange kana munhu achifunga kuunza Roses vachatsvaka sezvinoita ndyiro zvepabonde, vakadzi vanokoshesa murume kuti chivalrous. Chivalry haasi cradling mukadzi kusimba nokuti iye ari kusimba wamambo uyo anofanira kuponeswa Prince Charming. Hazvina pfava, mumwe kuratidza mutsa uye kuratidzwa kworudo uye ruremekedzo. Vakadzi vachiri kuda kutorwa pamusoro yemichindwe. Vasikana vachiri kuda kuratidzwa achikudza. Madzimai vachiri kutarisira kuti vasine.
Chivalry anoita munhu ave murume nomukadzi sokuti mukadzi. Itirawo Vahosi vari hwako nemabasa aya chivalry uye kudanana nemasaini, kana muri kuenda musi wechipiri kana ndave ndakaroorwa 10 makore.
Ichakushamisa naye seruva paari rokuberekwa, musi Valentine Day kana nokuti. kutumira maruva, kufanana Vakamupfekedza FTD akasimuka akasungwa, kungava kudanana Cliche, asi vakadzi rudo wevaFiripi ichi kusvikira pakuguma nguva.
Muudzei iye uri zvose. Muudzei chiso nechiso. mameseji naro. Nyora pachigadziko Post-nayo. Just nechokwadi iye haambokanganwi izvozvo.
Famba pedyo nomugwagwa, uye abate rwake achiyambuka motokari. Kunzwa sokuti uri kudzivirira kwake kuchengeteka ndiko hunoyemurika.
Mutorei akanaka chisvusvuro. Kunyange pashure pemakore yokudya Pizza panhoo pamwe chete, akanaka chisvusvuro rekindles kuti chimvari. Ehe, kufamba mberi kuvhura musuo motokari yaro.
Anobatirira rwake asingatarisiri. Bata ruoko rwake paunenge kuona TV kana apo mumutsetse kofi. Mwoyo flutter.
Kwazisai naye pamukova pamberi zuva, uye famba naye pamukova pashure. Ndizvo zvinoitwa sei mumafirimu.
Dana kuongorora muna, pane Rugwaro. Iye aitungamirira mukadzi muupenyu hwako uye kukosha zvakakwana kuita runhare.
kuzadzikisa naye. Nekuti iye ari tsvarakadenga.